Njikọ Detox: Chọta backlinks na-egbu SEO gị | Martech Zone
Njikọ Detox: Chọta backlinks na-egbu SEO gị
Backlinking na-aga n'ihu ịbụ egwuregwu dị oke egwu. Kedu oge bụ usoro kachasị mfe iji wuo ogo gị n'ịntanetị ugbu a nwere ike lie gị saịtị. Ugbu a, ọ dịla gị mkpa disavow njikọ ndị ahụ nke na-egbu ogo ọchụchọ gị - tinye Njikọ Detox, akụkụ nke ezinụlọ nke ngwaahịa na NjikọResearchTools.
Link Detox bụ ngwa ọrụ naanị ya na - ekekọta ngalaba backlinks na ngalaba 3 (nsị, enyo, ma ọ bụ ahụike) ma na - akwado gị na nhicha profaịlụ njikọ gị. The interface nke Link Detox dị mfe ijikwa, ị nwere ike ịchọpụta njikọ njikọ niile dị na saịtị gị site na iji otu ịpị. Link Detox na-enyocha profaịlụ njikọ gị dabere na ọtụtụ usoro SEO na usoro nsogbu mara. Ha na-enyezi ndụmọdụ maka njikọ ndị ahụ na-egbu egbu.
Ị nwere ike debanye aha maka Link Detox ma gbuo 1 detox kwa ọnwa maka $ 40.
Tags: backlinkingbacklinksọjọọ backlinksnjikọ ọjọọnjikọ detoxnjikọresearchtools
Ọ dị ka ịmara na m na-eme nke a n'abalị a. Mee ihe niile nke backlinks ma na ibe obibi nke saịtị site na ịgbanwee URL ma ọ bụghị 301ing ha - oke PITA. Ọ ga-ewe ọnwa mana ọ bụ ya mere m ji enweta okpu isi awọ.
Ga-ajụrịrị ihu akwụkwọ mbụ
Ọ bụ ụzọ dị mfe di ma ọ bụ nwunye. Dị nnọọ nbanye LinkResearchTools na ndị ọzọ na ha ga-eme na-akpaghị aka. M gụrụ otu isiokwu gbasara Otu esi zere Penguin yana usoro ntuziaka. http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
Nov 27, 2013 na 6:42 AM
Mgbe m jiri Link Research na Link Detox enwere m nnukwu ndakpọ olileanya na ọrụ ahụ na nsonaazụ ya. Ọ bụghị ọtụtụ ihe mere, enwetaghị m enyemaka dị ukwuu mgbe m chọrọ ya. Ekpebiri m iji ndị na-ahụ maka ndị na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ihe ndị na - eme ka ndị na - ahụ maka ihe ndị na - eme ka m nwee ike ịchọta backlinks ha mgbe m hụrụ nyocha dị mma n’ọgbakọ dị iche iche. Ọrụ ha ka nnọọ mma! Ha nwere ndi otu na-enyere gi aka na ajuju ma obu ndumodu. Iji The Link Auditors 'ngwaọrụ, enwere m ike ịchọta njikọ m niile na-egbu egbu, ma wepu ha niile n'ụzọ zuru oke. Jason, onye otu m gwara okwu, nyere aka na nkwado ekwentị. Enye ama esikpan̄ utọn̄ okop mme mfịna mi onyụn̄ anam nnen̄ede mfiọk se ifọnde. Ozugbo o mere nke a, ọ gwara m ngwaọrụ nke ga-akacha baara m uru.
Iji The Link Auditors 'ngwaọrụ, enwere m data zuru ezu, enwere m ike ịhụ kpọmkwem njikọ ndị na - eme m ihe ojoo ma amaara m nke njikọ dị mkpa iwepụ. Iji ha mwepụ ngwá ọrụ dị mfe dị ka ọ bụ n'ụzọ zuru ezu akpaka na nnọọ ngwa ngwa. M ji dị iche iche dị iche iche na-ewepu ngwá ọrụ ndị na-dị na ịntanetị, na ha bụ ndị kasị mma!
Nov 28, 2013 na 4:31 AM
Ejikwa m Auditors Link ahụ. Ha nyeere m aka nke ukwuu na nyocha m, na-akwado nkwado mgbe m chọrọ ya yana kọwaara m nsogbu m. Daalụ maka izipu nke a dịka m chere na ndị mmadụ kwesịrị ịma gbasara ha. Ọrụ ha na-enye dị oke egwu, yabụ ntụkwasị obi ma dịkwa mfe ịrụ.